‘काठमाडौंबाट साना गाडी हटाउने अभियान सुरु’
अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, माघ २४, २०७३
काठमाडौं उपत्यकाबाट साना र २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने अभियान सुरु गरिएको बताउदै यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डे भन्छन् “साना र पुराना सार्वजनिक गाडी हटाउने अभियान देशभर चलाउँछौ ।”
काठमाडौं उपत्यकाबाट साना गाडी हटाउने अभियान कहाँ पुग्यो ?
साना गाडी हटाउने अभियान सुरु भएको छ । पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेका छौं । कतिपय गाडीधनीले हटाइ सक्नुभयो भने कतिपय हटाउने क्रममा हुनुहुन्छ । फागुन १८ गतेदेखि उपत्यकामा २० वर्ष पुराना र साना गाडी चल्दैनन् । पहिलो चरणमा गोंगवुदेखि सिनामंगल रुटमा कार्वान्वयन गर्दैछौ ।
हटाउने सूचिमा के के परेका छन ?
सार्वजनक यातायातका रुपमा रहेका माइक्रोबस, टेम्पो, सफा टेम्पो र जीपलाई साना गाडीको सूचिमा राखेका छौं ।
किन साना र २० वर्ष पुराना गाडी हटाउन लागिएको हो ?
पहिलो कुरा साना गाडीले उपत्यकामा ट्राफिक जामको समस्या बढ्यो । दोस्रो शहरको सुन्दरता बिग्रियो, प्रदुषण र दुर्घटना बढे । इन्धन खपतका आधारमा साना गाडीले सेवा प्रदान गर्न सकेनन् । उपत्यकामा कार्वान्यनमा ल्याएपछि देशका अन्य भागमा पनि साना र २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने अभियान सुरु गर्छौ ।
यसले व्यवसायीलाई त नोक्सान पुग्ला नि !
व्यवसायीहरुको समस्याको बारेमा पनि सोंचेका छौ । काठमाडौं दीगो शहरी यातायात आयोजनाले अध्ययन गरेर उपत्यकामा ६६ रुट तय गरेको छ । तिनलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरेर रुट वर्गीकरण गरेका छौं । महत्वपूर्ण रुटमा ठूला गाडी सञ्चालन हुन्छन्, बाँकीमा ट्याक्सी । अन्य विकल्प पनि खोजिरहेका छौं । अर्को कुरा साना गाडी विस्थापित भएका गाडी धनीहरुलाई कम्पनी मोडेलमा गाडी दर्ता गराउन १५ प्रतिशत बीउ पूँजी दिन्छौं । ठूला गाडी खरिद गर्दा सहुलियत दरमा ऋण पाउनुहुन्छ ।
यसले ‘ट्राफिक जाम’को समस्या समाधान हुन्छ त ?
ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि यो बाहेक अर्को विकल्पै छैन । ठूला गाडी जान नसक्ने ठाउँमा निश्चित संख्यामा ट्याक्सी मात्र रहन्छन् । साना गाडीले राम्रो सेवा प्रदान गर्न नसकेपछि आवश्यकताका आधारमा साना गाडी हटाउने अभियान सुरु गरिएको हो । समस्या परेपछि मात्र समाधानको उपाय खोजिन्छ । हिंजो समस्या थिएन दर्ता भए, आज समस्या भयो, हटाउन लाग्यौं । यसले ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुने विश्वास लिएका छौं ।